संविधान खोस्टो बन्ने खतरा छ (अन्तर्वार्ता) - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारमंगलबार, पौष ७, २०७२
संविधान खोस्टो बन्ने खतरा छ (अन्तर्वार्ता)
६ दशक लामो वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय भरतमोहन अधिकारी करीब तीन दशक सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को स्थायी समितिमा रहे। वामपन्थी दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै २०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगका सदस्य भए। एमालेको तर्फबाट दुई पटक उपप्रधानमन्त्री सहित चार पटक मुलुकको अर्थमन्त्री समेत बने।
यस अवधिमा पार्टीभित्र संवेदनशील तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा उनको भूमिका प्रभावशाली रह्यो। एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट सक्रिय जिम्मेवारीबाट विदा लिएर उनी यतिवेला संसद् सदस्य छन्। अर्थशास्त्र र कानूनका ज्ञाता अधिकारीले हिमाल सँगको कुराकानीमा मुलुकको वर्तमान समस्या, सम्भावित संकट र समाधानबारे आफ्नो गहिरो बुझाइ प्रष्ट्याउने जमर्को गरेका छन्। अन्तर्वार्ताको संक्षेप :
म यतिवेला मुलुकका चार प्राथमिकता देख्छु। पहिलो, महाभूकम्प पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कुरा। आठ महीनापछि बल्ल प्राधिकरण विधेयक पारित भएको छ। अब सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा काम गर्नुछ। दोस्रो, भारतको नाकाबन्दीबाट अर्थतन्त्रमा पारेको असर विरुद्ध जुध्ने। यसका लागि भारत र चीन दुवैसँग तत्काल नाका खोल्ने कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण भारत आफ्नो अडानबाट शिफ्ट भएको छ। तेस्रो, देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने। र, चौथो संविधानको कार्यान्वयन।
विज्ञका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि झण्डै २०० नयाँ कानून निर्माणका साथै उत्तिकै संख्यामा पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ। नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक देश भए पनि राज्य सञ्चालनमा विभेद कायमै छन्। महिला–पुरुष, दलित–गैरदलित, मधेशी–पहाडे, गाउँ–शहरबीच विभेद छ। लोकतन्त्र विभेदका आधारमा होइन, सहमति र सहकार्यमा चल्छ। भारतमा जवाहरलाल नेहरूले ‘न्याशनल इन्टिग्रेसन काउन्सिल’ बनाए जस्तै हामीले पनि यहाँका जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र र समुदाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित परिषद्मार्फत राष्ट्रिय एकीकरण गर्न सक्नुपर्छ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि कांग्रेसभित्रैको एक तप्का र बाहिर पनि संसदीय व्यवस्थामा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ का लागि सशक्त प्रतिपक्षको आवाज उठेको थियो। यसले पनि उसलाई प्रतिपक्षमा बस्न दबाब दिएको त होइन?
सामान्य अवस्थाको संसदीय प्रजातन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ। तर, हामी यतिवेला असामान्य अवस्थामा छौं। संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायतकै उदाहरण लिऊँ।
दोस्रो विश्वयुद्धताका प्रधानमन्त्री भएका विस्टन चर्चिलले क्याबिनेटमै प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ल्याए। राष्ट्रिय सरकार बनाए। किनभने त्यो असाधारण समय थियो। संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बाँकी नै रहेको अवस्थामा सशक्त प्रतिपक्षको कुरा गर्नु बचकना सोच हो।
मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन प्याकेजमा ‘डिल’ हुनुपर्ने भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन नहुँदाका जोखिमबारे दलहरू जानकार नभएकै हुन्?
मधेशी, जनजाति, महिला, दलितका सन्दर्भमा यो संविधानले पहिलेभन्दा थुप्रै अधिकार व्यवस्था गरेको छ। राम्रा कुराको प्रचार भइरहेको छैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र एक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा संशोधन विधेयक तयार छ। सीमांकनबारे भारतले पनि बोलिसक्यो। सरकारले पनि राजनीतिक संयन्त्र बनाएर तीन महीनाभित्र टुंगियो भन्ने गरी बीचको बाटो निकालिएको छ।
विश्व समुदाय भारतीय नाकाबन्दीको चाँडै अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ। नाकाबन्दी गरिरहेको भारत पनि नेपालको समस्या समाधान होस् भन्दैछ। मधेश आन्दोलन समाधान गर्ने यो उपयुक्त मौका हो। मौका सदुपयोग गर्न पनि दुई दल एकठाउँ आउनुपर्छ।
तराईमा एक प्रदेश भन्ने, पहाडे खेद्ने, काठमाडौंविरुद्ध साम्प्रदायिक भाव उठाउने कुरा नराम्रो हो। उपेन्द्र यादव मसँगै उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यदि उहाँ राष्ट्रिय नेता हुने हो भने चिन्तन पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ।
मलाई महोत्तरीको माया छ भने उहाँलाई पोखराको माया किन नलाग्ने? आन्दोलनकारी मधेशी नेतृत्वमा तत्कालको फाइदाका लागि किन साम्प्रदायिक नहुने भन्ने गलत सोच हावी भएको देखिन्छ। सदियौंदेखि पहाडे–मधेशीबीच सद्भाव नबिथोलिएको देश हो, नेपाल।
केही दिनपछि नाकाबन्दी खुल्ला। त्यसपछि समाजमा सम्झना मात्रै बाँकी रहन्छन् या प्रभाव अलि परसम्म पर्ला?
खुशी नै मान्नुपर्छ, नाकाबन्दीप्रति भारतीयको ‘स्ट्याण्ड सिफ्ट’ भएको छ। आखिर; भारत के चाहन्छ, हामी के दिन सक्छौं, के सक्दैनौं? प्रष्ट पार्नुपर्छ। ऊसँग नयाँ सन्धि, सम्झौता गर्नुपर्छ।
गत अप्रिलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा भारत–चीनबीच १४ बुँदे सम्झौता भयो। लिपुलेकलाई मुद्दा बनाइयो। चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय आर्थिक करिडोर बनाउने कुरा पनि निस्कियो।
तीन देशबीच सडक, विद्युत् मार्गका कुरा पनि सुनिएका छन्। चीन र भारतले खर्बौको व्यापार गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि यी दुई देशसँग नयाँ उँचाइमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु हाम्रो दायित्व हो। भारतले नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन। यो कुरामा भारत प्रष्ट हुनुपर्छ।
दुःखको कुरा, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध परराष्ट्र सचिव, राजदूत, रअका प्रतिनिधिसँग ‘डिल’ हुन थाल्यो। ‘डिलिङ’ त राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ। भन्नुपर्छ, हामी भारतका ‘वेस्टफ्रेण्ड’ हौं। तर, तपाईंले पनि राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। नेपाललाई स्वतन्त्र देशको हैसियतमा व्यवहार गर्नुपर्छ।